Fangaroan'ny rivotra mitsoka, Fitaovana Escalator Lifatra, milina fanoratana - Hongli
Natsangana tamin'ny taona 1997, ny Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co, Ltd dia mpamorona matihanina sy mpamokatra ho an'ny zavamanana an'ny diagnostika ankapobeny ao anatin'izany ny Digital Thermometer, Infrared Thermometer, ary Digital Sphygmomanometer sns sns Ny fetranay isam-bolana dia eo ho eo ny 850,000 unit ho an'ny thermometer sy 100 000 unit ho an'ny Sphygmomanometer.
Amin'ny maha-orinasa teknolojia avo lenta, ny departemanta R&D dia misy injeniera, teknisianina ary mpamorona manana traikefa be dia be ny optoelectronics, semiconductor ary IC famoronana sns.
Ny fampiasana ny motera Siemens servo sy ny mpiandraikitra ny fihetsiketsehana Siemens dia afaka manome rafi-pandaminana mifehy fihenjanana azo antoka, rafi-pandaminana mora hita amin'ny Internet, ary afaka mifandray amin'ny Internet of Things. Ny fanaraha-maso lavitra dia miorina amin'ny rafitra fanaraha-maso lehibe, miaraka amin'ny kely sy ny fahatokisana avo kokoa. Ny fifehezana cylinder Ny famoronana shaft-tsy mavitrika dia azo atao mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa, ary misy konfigurasi isan-karazany.
Ireo manam-pahaizana manokana momba anay